Fil d'actualités du 08/04/2020
08/04/2020 - 09:00 : IVO-KETRA: Nisokatra nanomboka omaly 7 aprily izany ka "service minimum" amin'ny 8ora maraina hatramin'ny mitatao vovonana izany ho an'Analamanga, Antsinana, Matsiatra Ambony. Mitohy toy ny andavanandro ny faritra sisa.
06/04/2020 - 13:45 : COVID-19: Olona 10 vaovao no voamarina indray fa voa, manome ny isa ho 82. Ny 3 tamin'ireo voa dia avy any ivelany ary ny 7 no vokatry ny fifampikasohana. Ny 2 amin'ireo any Toliara, 1 any Nosy be, 4 teto Antananarivo (Alasora, Ampitatafika, Ankadifotsy).
06/04/2020 - 10:00 : ANDOHATAPENAKA: Ilaharana ny fanantonana ny toby fiantsoanana eny an-toerana maka ny antontan-taratasy hahafana mandray taksibrosy hodiana.
06/04/2020 - 09:30 : MAHAZO-AMBATOMARO: Leo ny tsy fisian'ny rano ny olona. Efa ho roa taona no tsizarizary ny famatsiana. Tamin'iny herinandro izao tsy nisy mihitsy. Voatery manarama olona izay vidiana 1000Ar ny bidon. 1 tapitrisa mahery ny iray citerne.
06/04/2020 - 09:00 : COVID-19: Miisa 72 ny isan’ny olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara, fa ny 2 kosa no efa sitrana. 32 vehivavy, 40 lehilahy, ka 51 avy any ivelany, ary ny 21 dia vokatry ny fifampikasohana.
05/04/2020 - 23:00 : ANDRY RAJOELINA: Mitohy mandritra ny 15 andro ny fihibohana. Mihantra manerana ny nosy ny tsy fahafaha-mivezivezy amin'ny 8ora alina hatramin'ny 5 ora maraina, ny fivorivoriana samihafa. Miato ny fampiarana rehetra. Voarara ny fifamezivezena na ho an'ny taxi na ho an'ny taksibe eto Antananarivo.
05/04/2020 - 14:00 : COVID-19: Olona iray indray no voamarina fa tratran'ity aretina ity eto Madagasikara. Mpandeha tamin'ny sidina AF934 tonga ny 17 martsa io. Olona 2 kosa no sitrana, ka 69 izany ireo voa amin'izao fotoana izao.
04/04/2020 - 16:30 : FILANKEVITRY NY MINISITRA: Tapaka fa mitohy mandritra ny 15 ny hamehana ara-pahasalamana eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara.
04/04/2020 - 14:00 : ARP HELISOA: Nadoboka am-ponja vonjimaika i Arphine Helisoa, izay ambara fa naniratsira ny filoha sy miantso fankahalana araka ny fitoriana nataon'ny fanjakana.
03/04/2020 - 18:00 : ASA FANAOVAN-GAZETY: Nampanantsoin'ny Sampan-draharaha miandraikitra ny Cybercriminalité i Arphine na Arp Helisoa mpanao gazetin'ny Valosoa noho izy voatonona ho naniratsira ny Filoham-pirenena ka notorian'ny Fitondram-panjakana. Tànana eny amin'ny BC Anosy izy amin'izao fotoana izao.
Archive du 20200205
Tsy milamina ny tanàna Nidina an-dalambe ireo mpivarotra
Horakoraka sy tabataba tsy nifandrenesana tetsy Anosy omaly tolakandro satria dia nidina an-dalambe nivezivezy nanamorona an’iny farihy iny sy ny manodidina azy ireo mpivarotra amoron-dalana.
Fampandrosoana entin’ny governemanta vaovao « Hiisatra sy tsy hipaka mivantana amin’ny vahoaka »
Betsaka ireo fotodrafitrasa tsy miaro ny vahoaka eto amintsika, hany ka vaky, toy ny lalan’i Mahajanga, ohatra, hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko politika, ABA, Dany Rakotoson,
Tetibolan’ny kaominina Antananarivo Nandeha ny politika avo lentan’ny fifidianana
Lany teo anivon’ny filankevitra monisipaly omaly ny tetibolan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).
Fitondrantenan’ny polisy Nampitandrina ny minisitra vaovao
Nanatanteraka fidinana ifotony nihaonany mivantana amin’ireo polisy rehetra eo ambany fifehezany sy ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka ny minisitra vaovao ny Controleur General de Police Randrianarison Fanomezantsoa Rodellys.
Fanodinkodinam-bola 3 miliara ariary Voapaingotra ny “Trésorier Municipal” an’ny CUA
Natolotra ny PAC na ny « Pôle Anti-Corruption » omaly ny raharaha fanodinkodinam-bola teo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Sarona nandritra ny fitsirihana nataon’ny Mpitsirika ankapobeny ara-panjakana (IGE)
Fiara haiditra “Fourrière 200 000 ariary isan’andro ny lamandy tsy maintsy aloa
Teboka vitsivitsy no niteraka adihevitra nandritra ny fivorian`ny filankevitra monisipaly omaly ka anisan`izany ny sandan`ny fanagiazana fiara izay 200 000 ariary isan’andro.
Lycée français Ambatobe Mpiasa 140 nanao fitokonana fanairana
Nanatanteraka hetsika fanairana teny amin’ny Lycée Francais Ambatobe, omaly, ny mpiasa miisa 140, frantsay sy Malagasy.
Mpitsara nitory mpikabary Hivoaka amin’ny 11 febroary ny didy
Omaly no niakatra fampanoavana tetsy amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Anosy ilay raharaha mpitsara nitory mpikabary noho ny resaka tandra teny amin’ny tarehy.
Faneva Ima Naka retirety iraisampirenena
Tao amin’ny tambajotra Twitter no nilazan’ny kapitenin’ny ekipam-pirenena Malagasin’ny baolina kitra teo aloha,
Filohan’ny FMF Nanome valin-kafatra amin’ny fanenjehana azy
Ny 30 janoary teo, nialoha ny handraisako fiaramanidina hihazo an’i Maraoka, hoy ny fanazavan’ny filohan’ny federasionina malagasin’ny baolina kitra,
Rugby – Famaranana ny Gold Top 20-2019 Hanombola amin’ny 7 ora maraina ny fivarotana tapakila
Noho ny fandaminana napetraky ny Malagasy Rugby hisorohana ny fifanosehana eo am-pidirana dia hisokatra avokoa ireo vavahady miisa
Ligin’ny baolina kitra Matsiatra Ambony Efa vita ny tatitry ny fikaonan-doha nasionaly
Efa nahavita ny tatitra tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny ligim-paritry ny baolina kitra Matsiatra Ambony sy tamin’ireo klioba,
Fanampiana ny taranja Pancrace Niditra an-tsehatra ny Fikambanana FFAM
Nanampy taranja fanatanjahatena iray hafa indray ny fikambanana F.F.A.M (Force Féminine d'Aide Mutuelle),
Edito Manonofy sy ampanofisina
« Rahoviana ihany izay vao valala be mifoha ? », hoy ny fanontaniana iray nipetraka efa tany amin’ny taona 90 izay.
Ozinina Ambatovy Notsidihina masoivoho miisa 4
Lim Sang-Woo, masoivohon’i Korea Atsimo, Christophe Bouchard, masoivohon’i Frantsa, Michael P. Pelletier, Etazonia ary ny lehiben’ny birao ao amin’ny masoivohon’i Norvezy, Andreas Danevad,
Vola lany amin’ny fanisam-bahoaka Mahatratra hatrany amin’ny 20.000.000 dolara
Ahafantarana ny isan’ny olona erak’i Madagasikara na faritany na distrika na faritra hatrany amin’ny fokontany ny fanisam-bahoaka, hoy ny fanazavan’ny mpahay antontanisa, Tarzan Ndremitsara.
Valan’aretina avy ao Sina Mbola misy mandripaka noho ny Coronavirus
Hatramin’ny taona 1976 no efa namono olona manodidina ny 15.000 isa teto Afrika ny valan’aretina Ebola, raha ny tatitry ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana na OMS.
Tsy ampy solika sy fiara ny BNGRC Fa lasa aiza ny vola ?
Faritra telo amin’ny fito no afaka hisitraka ny fanampiana avy amin’ny Birao misahana ny loza sy ny tandindon-doza (BNGRC). Kely ny tolotanana voaangona nisy nanatitra teny.
Groupe Axian sy ireo mpiara-miasa aminy Nanampy ny sahirana sy mirenireny
Mbola anaty fahasahiranana tanteraka I Madagasikara amin’izao fotoana izao ary hita taratra izany eny amin’ireny faritra maro samihafa ireny.
Aretina homamiadana 1600 isan-taona ireo marary tsaboina eto Madagasikara
Mihamahazo vahana hatrany ny aretina homamiadana eto amintsika. Ankoatra ireo mahalala fa tratr’ity aretina ity izy dia mbola betsaka ireo tsy mahalala ka anisan’ny maro an’isa amin’izany ny vehivavy.
Fambolen-kazo Tokony hisy fanaraha-maso hatrany
Tokony hisy fanaraha-maso hatrany ny zanakazo volena, indrindra amin’izao fotoam-pahavaratra izao fa tsy avela hikodana fotsiny eny an-tendrombohitra.
Mpianatra malagasy manohy fianarana any Torkia Hampitomboina avo roa heny
Tonga tetsy amin’ny lisea tekinika Ampefiloha omaly ny avy eo anivon’ny Fondation Moarif, Torkia, nanazava ireo mpianatra teny an-toerana ny fomba atao raha maniry hanohy fianarana any aminíty firenena iray ity.
Fikoropahana sa tsy fahaiza-miasa ? Diso daty ny fanjakana
Asa na noho ny fikoropahana na tena fanaovana kitoatoa amin’ny asa fa dia diso daty indray ny fanambarana ofisialy navoakan’ny fitondram-panjakana izay niparitaka be omaly.
Fifanarahana amin’ny Maorisianina Misy afera tsy mazava indray ny JIRAMA…
Vita afak’omaly ny soniam-piaraha-miasan’ny JIRAMA sy ny vondrona LIDERA miorina atsy Maorisy, miompana amin’ny fametrahana tobim-pamokarana herinaratra zato isan-jato avy amin’ny masoandro na ilay antsoina hoe « Full solaire ».
Antananarivo Mitombo isa ireo mamo matory an-dalana
Mihamitombo isa ireo mamo matory an-dalana eto Antananarivo. Na maraina na atoandro na alina dia saika ahitana azy ireny hatrany amina toerana maro.
Tanjombato Nitsoraka tao amin`ny ranon`Ikopa ilay fiara 4x4
Tany anatin’ny ranon’Ikopa no nifatratra ny fiara tsy mataho-dalana iray marika Nissan omaly maraina, teny Tanjombato.
Fanavotana tovolahy nalaina an-keriny Dahalo 2 rotiky ny balan’ny GSI tany Sakaraha
Tovolahy 17 taona no nalain'ny dahalo mitam-piadiana an-keriny ny alatsinainy 3 febroary 2020 tokony ho tamin'ny 08ora maraina tao Soarano any amin’ny distrikan’i Sakaraha.
Fikambanana Fanantenana FAFI-5 Nanampy ireo may trano tetsy Anjanahary
Tonga tam-pitiavana namangy sy nampahery ary nitondra fanampiana toy ny fanitso, vary, menaka, voamaina, koveta, siny ary kojakojan-dakozia samy hafa ho an’ireo traboina vokatry ny hain-trano teny Anjanahary II N